Etu esi edozi ahihia ndi ozo maka ichota ndu ndu-News-Topflor China
Echiche:28 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-03-11 Mmalite: Saịtị
Naa, anyị wuru turf na ọtụtụ-eji anyị n'ihi na nke adaba iji na ala price. Ificationchọ mma gburugburu ebe obibi nwere njikọ chiri anya na ndụ anyị. Iji mepụta ebe mara mma nke ime ụlọ na n'èzí, turf artificial na-arụ ọrụ dị mkpa. Taa, nchịkọta akụkọ na-agwa gị otu ị ga-esi dina edozi turf maka ihu ala na ahịhịa na ahịhịa.
1. Kwadebe ahịhịa artificial maka oge ntụrụndụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na ebe a ga-ete ụzọ dị ezigbo larịị ma dịkwa larịị, dị ka n’ime ụlọ. Biko leghara usoro a anya ma gafee nke abụọ nke ahihia na-agbasa.　A. Tinye akara na ebe a ga-achọpụta (ebe a na-emepụta turf).　B, gwuru olulu 100 mm miri miri emi ka mmiri zoo.　C. Gbasaa gram 75 mm na lime 5 mm ma ọ bụ ájá n'elu tebụl artificial.　D. Kwadebe ntọala ala ahịhịa: dozie ala, fesa ụfọdụ mmiri, jiri kọmị kọwaa ntọala ahụ. Gbaa mbọ hụ na enweghị okwute pụtara n’elu. Na mgbakwunye, ntọala ahịhịa ga-adị 20 mm ala karịa ala ahụ dị larịị. 2. Odida ala ntụrụndụ na ahịhịa ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na-agbasa. A na-akwakọba ahịhịa artificial, na-ebugharị na mpịakọta. Mgbe ebugara ya na ebe a na-ete ya, okwesiri imeghe ahihia ahihia ma mezie ya. Mgbe ị debere ya maka ụbọchị 1-2, ka ahịhịa ahụ gbasaa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma guzo ọtọ.　Obosara a na-agbasaghị na-akpata nsogbu nke nkwonkwo na-adịghị ike ma ọ bụ na-apụta n'azụ oge nke ahịhịa, nke na-emetụta ndụ ọrụ na ịma mma nke ahịhịa.　Mgbe ị na-edozi ahịhịa, jide n'aka na ntụziaka nke ahịhịa ọ bụla bụ otu. Iji hụ na ndị nkịtị nke ntụziaka nke ahịhịa.　3. Wuru ahihia ọnwụ　Jiri mma di nkọ wepu ahihia ahihia. Iji mee ka ahihia ahịhịa ahụ dị larịị, gbaa mbọ hụ na nsọtụ ahihia ahịhịa ahụ kwụ ọtọ mgbe ị na-egbu ahịhịa. Nkọwapụta nke ekwesịrị ị attentiona ntị na ya agaghị emebi ahịhịa. E kwesiri ikewapu ahihia ihe dika 0.5cm site na ahihia.　4, ijikọta tụgharịa ọnụ nke ahịhịa ahịhịa na nsọtụ abụọ, ma hụ na akwa akwa njikọ ahụ dị ọcha. Debe akwa akwa ahụ ozugbo, tinye gluu na akwa akwa ahụ, tinye ahịhịa ahụ na nsọtụ abụọ ahụ na akwa akwa ahụ, ma hụ na ọnụ ọnụ ahịhịa ahịhịa ahụ dị na etiti akara akwa ahụ. Jiri mkpịsị aka gị mee ka nsọtụ abụọ nke eriri ahụ kwụpụ ma wepụ ya.　Ime ụlọ n'ime ahịhịa nwere ike ịmụta usoro nke ịrapara n'ahụ, ya bụ, a na-agbanwe gluu n'etiti na ihe ndị gbara ya gburugburu. Nnukwu n'èzí ahịhịa ahịrị na-achọ ahịrị. A na-etinye gluu n'ahịrị dị n'etiti ala na akwa akwa, na ala nke ahịhịa ahịhịa ahụ dị na nsọtụ abụọ a gbanwere ma kpoo ya na akwa akwa.　Mgbe ị na-agbapụ ma na-ehicha ahịhịa artificial, naanị ịkwesịrị idozi nkuku anọ ma ọ bụ nsọtụ ahịhịa. Ebe etiti anaghị mkpa ịgbanwe gluu. Ọ bụrụ na ịchọghị wepu ya, ịnwekwara ike itinye gluu niile.